Yintoni i-Decentralized Finance? Isikhokelo esigqibeleleyo kwiiPlatifomu zeDeFi ngoJanuwari ka-2022
Yintoni iMali eziMiselweyo? Isikhokelo sokuGqibela kumaQonga eDeFi
Ukuhlaziywa: 4 April 2021
Imali eyabelwe amaziko asezantsi yenye yeemarike ezisakhasayo ekulindeleke ukuba zibe nefuthe elibonakalayo kubume bemali obukhoyo ngoku. Inesakhono sokutshintsha ubume beenkqubo zebhanki esele zikhona kunye nendlela ezisebenza ngayo kwixa elizayo.
Igama elithi DeFi libandakanya yonke inkqubo entsha ye-ecosystem yeenkonzo zezezimali ezisebenza ngaphandle kwabalamli- njengeebhanki okanye iindawo zokucoca. Endaweni yokuba la maqonga anikwe amandla zizivumelwano ezizizo.
Kwesi sikhokelo, siza kujonga ngakumbi indlela iDeFi enokutshintsha ngayo indawo yezemali njengoko sisazi. Siza kugubungela amanqaku ezinye zezona zixhobo ziphumeleleyo zeDeFi onokuzama namhlanje.
I-Nexo-Iplatifomu yeenjongo ezininzi ze-Cryptocurrency
Zuza inzala yokufikelela kwi-12% ngonyaka kwi-crypto nakwi-fiat deposits
Boleka imali ye-fiat endaweni yediphozithi yokhuseleko lwe-crypto
Ikhadi le-Nexo debit kunye neenkonzo zotshintshiselwano
Idumela elihle, ukhuseleko oluphezulu, kunye neinshurensi endaweni
Yintoni iMali eziMiselweyo?
Ezezimali ezisemthethweni, okanye 'iDeFi' ngamafutshane, lelinye lamacandelo akhula ngokukhawuleza kwisithuba se-crypto. Iinjongo zayo kukuphinda iinkonzo zenkcubeko zemali ngendlela ezinikezelweyo- kusetyenziswa ibhlokhi kunye nezivumelwano ezifanelekileyo.
Umzekelo, namhlanje, unokufumana isisombululo semali esisesikweni esivumela ukubolekisana koontanga kunye nokuboleka ngaphandle kokuba nomlamli konke konke-enkosi kwi-blockchain protocol.
Khawufane ucinge xa ​​uthatha imali mboleko ngaphandle kokuya ebhankini okanye ungakhange uzingenise kulo naluphi na uhlobo lwetyala. Endaweni yoko unokufumana umntu nakweyiphi na indawo ekulungeleyo ukuboleka imali kuwe - kusetyenziswa usetyenziso olusasazekileyo lwehlabathi (dApps).
Ngokungafaniyo neenkonzo zemali zesiko, iDeFi ibonelela ngokungavumelekanga, ngaphandle kovavanyo, kunye nenkqubo evulekileyo yekhosi.
Injongo yeDeFi kukuhambisa iinkonzo ezifanayo neenkqubo zemali eziqhelekileyo - kodwa ngendlela elula, evulekileyo, kunye nehlabathi. Oku kuyakuvumela ukuba uququzelele intengiselwano ebiza imali encinci kwaye ekhawulezayo ngaphandle kwamaphepha okanye ubuncinci bokuthengiselana - kunye nezibonelelo ezongeziweyo zokuphendula kunye nokwenza izinto elubala ngokupheleleyo.
Isebenza njani iMali eseMthethweni?
Uninzi lweeprojekthi zeDeFi zakhiwe kwisivumelwano se-smart blockchains-ezinje ngokuthandwa kwe-Ethereum. Kulabo abangaziyo, 'iikhontrakthi ezikrelekrele' ziinkqubo zekhompyuter ezingenakuguqulwa ezithunyelwe kwi-blockchain- eqhuba xa kusenziwa imiyalelo emiselweyo.
Ezi khontrakthi zilumkileyo zivumela abaphuhlisi ukuba bangenise ukusebenza ngakumbi kwii -apps ezisasazwayo. Ngaphaya koko, iiprojekthi zeDeFi zixhomekeke kakhulu kwiingqekembe ezinzileyo ezinje ngeTether kunye neUSDC, njengoko kungenakwenzeka ukwenza iikhontrakthi zeenkonzo zezemali kwezinye izinto eziguquguqukayo.
Umahluko phakathi kweDeFi kunye neeNkonzo zeMali zeMveli
Ngaphambili, iDeFi dApps inezinto ezithile ezizenza zibenomtsalane ngakumbi xa kuthelekiswa namaziko emali aqhelekileyo.
Ukusebenza kwemali kula maqonga e-DeFi akalawulwa ngumbutho ophakathi. Endaweni yokuba le misebenzi isekwe kuseto lwemigaqo ebhalwe kwizivumelwano ezifanelekileyo.
Nje ukuba ezi khowudi zifakwe, ii -apps zeDeFi zinokuziqhuba ngaphandle kokufuna ungenelelo lomntu. Isidingo kuphela sabaphuhlisi ukuqinisekisa ukuba inkqubo iqhuba kakuhle- ukwenza ulondolozo kunye nokulungisa naziphi na iibhugi.
Ikhowudi esetyenziselwa ukwakha amaqonga e-DeFi iyafikeleleka kuye nakubani na kwi-blockchain ukuphicothwa. Oku kongeza ekuhleni, nokwenza igalelo ekwakheni ubudlelwane obuthembekileyo nabathengi.
Zonke izinto ezenziwayo kwi-DeFi ziyafikeleleka esidlangalaleni. Nangona kunjalo, amagama awaziwayo - ukuze isazisi sakho sikhuselwe.
Iiapp zizinto zehlabathi liphela, zikunika ukufikelela kwiinkonzo ezifanayo ngaphandle kwendawo okuyo. Nangona imigaqo yendawo izakusebenza ngokusekwe kwimimandla, uninzi lweeapps ziyafumaneka nakubani na ngonxibelelwano lwe-intanethi.
Mhlawumbi eyona nto inomtsalane kwiDeFi kukuba ayivumelekanga ukudala kunye ne nxaxheba ngaphakathi.
Ngokuchaseneyo neenkqubo zemali namhlanje, awunyanzelekanga ukuba udlule kubagcini-masango. Uya kunxibelelana ngqo nezivumelwano ze-smart ngeewallets zedijithali.
Ukongeza kwezi mpawu zingasentla, iDeFi inokubonelela ngamava omsebenzisi aguqukayo. Iikhontrakthi ezikrelekrele zenza ukuba ukwazi ukuphuhlisa ujongano lweqela lesithathu okanye wakhe eyakho.
Cinga ngeDeFi njengenye indlela evulekileyo, yelizwe jikelele kuyo yonke inkonzo yezemali efumanekayo ukuyisebenzisa namhlanje - ukusuka kwimali mboleko, iiakhawunti zokonga, imali yeinshurensi, kunye nokunye.
Ngawaphi aMatyala aqhelekileyo okuSebenzisa i-DeFi?
Ukusuka kwinto esiyibonileyo, iDeFi inakho ukuphazamisa indawo yezemali ngokuyila umgca omtsha weemveliso kunye neenkonzo.
Ewe, itekhnoloji isekwizigaba zayo zokuqala zophuhliso- kodwa ibonisa ithemba elikhulu phantse kuzo zonke izinto. Ii -apps zeDeFi sele zitshintsha indlela abantu abaziphatha ngayo nabaziphatha ngayo iiasethi zabo.
Nazi ezinye zeemeko zokusetyenziswa kweDeFi:
Vula amaqonga okuboleka nokuboleka
Ezona Ndawo zezeMali ziHlawulelweyo
Ngaba unomdla kuwo wonke umxholo wezemali ezisemthethweni? Ukuba kunjalo, kukho inani leDeFi dApps ezaziwayo onokuzama namhlanje. Into oyifunayo sisipaji semali yedijithali ukuze uqalise!
1.Nexo-Instant Cryptocurrency Ukuboleka kunye nokuHamba
Nexo liqonga lezezimali elabelwe ngokusemthethweni elikunika ukufikelela kwimali mboleko ye-crypto ekhawulezileyo, kunye nokuvumela ukuba ufumane inzala kwiiasethi zakho zedijithali.
Inkampani ye-blockchain-eyasungulwa ngo-2017- yi-100% ngokuzenzekelayo. Intsingiselo, ungafaka iasethi yakho, urhoxe kwimali mboleko, kwaye uyihlawule ngokwakho.
Njengeqonga lehlabathi, uNexo ubonelela ngeenkonzo zayo ngaphezulu kwezezimali ze-fiat ezingama-40 kwaye ukhonza ngaphezulu kwama-200 olawulo.
INexo ize nenkqubo yomvuzo kubathengi bayo, eyilelwe ngezixhobo zethokheni yayo ye-NEXO.
Ukuba ngumnini wethokheni ye-NEXO kunokukunika ukufikelela kwezi zibonelelo zilandelayo eqongeni:
I-NEXO Token sisikhalazo semali sokuqala kwihlabathi esihlawula iipesenti ezingama-30 zenzuzo yaso njengesahlulo kubanini.
Iimpawu ze-NEXO zikuvumela ukuba ufumane i-25% yenqanaba lenzala ephezulu kwiiasethi ezikwiakhawunti yakho yokonga yeNexo.
Ezi thokheni zikwenza ukuba ufumane ukuya kuthi ga kwi-50% isaphulelo kwinzala efunyenwe kwimali mboleko yakho ye-crypto.
Iimpawu ze-NEXO zinokuthengwa kwiqonga leNexo okanye kwenye yeendawo ezininzi ezixhaswayo zotshintshiselwano nge-imali yedatha. Qaphela ukuba ukuze ufikelele kwezi zibonelelo, iithokheni onazo kufuneka zigcinwe kwisipaji sedijithali seNexo.
Nazi ezinye zeemveliso eziphambili zikaNexo:
Imali mboleko yangoku ye-Crypto
Nge-Nexo, unokufumana ukufikelela kwimali-mboleko exhaswa ngokukhawuleza ye-crypto- ngaphandle kokuyeka ubunini beasethi. Isibambiso osibonelelayo sinokuba ngohlobo lwee-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin, i-Ethereum, okanye ingqekembe ezinzileyo.
Inkqubo iyasebenza ngokuzenzekelayo kwaye ikhuselekile. Into ekufuneka uyenzile kukufaka iiasethi ezixhasiweyo kwisipaji sakho seNexo. Umgca wekhredithi uya kufumaneka kwangoko kuwe-ngaphandle kokuba ugcwalise naluphi na uhlolo lwekhredithi. Ukuba ungaboleka malini kuya kuxhomekeka kwixabiso leeasethi zakho.
Unokukhetha ukurhoxisa imali ezinkozo okanye ezinzileyo kwiakhawunti yakho okanye kwikhadi lebhanki yeNexo. Uya kuba noxanduva lokuhlawula inzala kuphela kwimali oyirholileyo. Akukho xesha libuyiselweyo lokuhlawula imali mboleko ye-crypto kwi-Nexo. Ungavula uninzi njengoko ufuna, kangangesithuba sonyaka omnye. Ixabiso lenzala liqala kwi-5.9%.
Zuza iNzala kuTyalo-mali lwakho
UNexo ubonelela ngeakhawunti yokonga imali ye-cryptocur lwemali, apho unokufumana khona inzala kwiimali ezizinzileyo, ii-asethi ze-crypto, kunye nezinye iimali ze-fiat- ezinje nge-EUR, GBP, kunye ne-USD.
Inzala oyifumanayo isekwe kuhlobo lwempahla oyibekayo, kunye nenani leethokheni ze-NEXO onazo. Oku kuya kuhlawulwa kuwe rhoqo kwiiyure ezingama-24. Okwangoku, amaxabiso enzala ayahluka ukusuka kwi-5% ukuya kwi-10%.
Ukongeza -Ukuba ii-NEXO Tokens ubambe iiakhawunti ngaphezulu kwe-10% yeeasethi zakho zizonke kwiphothifoliyo yakho yeNexo, emva koko unokufumana ibhonasi yenzala eyongezelelweyo ye-2%.
Amakhadi entlawulo kwihlabathi liphela sesinye isicelo seDeFi esikunika ukufikelela kwihlabathi liphela kumgca wakho wekhredithi. Ngale ndlela-akukho sidingo sokuba uyirhoxise imali mboleko yakho kwiakhawunti yabucala. Endaweni yokuba ungayilayisha ngqo kwikhadi le-Nexo kwaye uqalise ukuyisebenzisa kwangoko.
UNexo ukwasungule utshintshiselwano olusemthethweni oluvumela ukuba utshintshe ngaphezulu kwe-100 yeedigital yemali kunye nezibini ze-fiat.
INexo ayikuhlawulisi nayiphi na imali yokufikelela kwiinkonzo zayo, ngaphandle kwexabiso lenzala kwimali mboleko yakho ye crypto.
Kukho isizathu sokuba iNexo ibe yinkqubo ejikelezwe kakuhle kwaye ihlala ikhethwa phakathi kwamaqonga ezemali asemthethweni. Iqela lihambe imigama emide ukuqinisekisa ukuba akukho litye lingaguqukiyo xa kufikwa kukhuseleko.
I-Nexo liqonga elilawulwayo, lokugcina elinikezela ngeenkonzo zesipaji ngeqabane lalo elide-iBitGo. Inkampani ibonelela ngeNexo ngogcino olubandayo, igumbi lendlu yesithathu, kunye nenkqubo yokugcinwa.
Ukongeza, uNexo usebenza noLedger Vault ukuqinisekisa ukhuseleko lweeasethi zakho eqongeni. Ukudityaniswa kwezi, iinkonzo zikaNexo okwangoku zigutyungelwe yinshurensi ye- $ 375 yezigidi.
Lilonke, uNexo ubonelela ngethuba elinokuthenjwa kubatyali mali bexesha elide abafuna ukusebenzisa iiasethi zabo ze-crypto ukwakha ubutyebi. Ukubuya, ufumana ukufikelela kwindlela ekhuselekileyo ne-inshurensi yokufumana inzala ephezulu kwiiasethi zakho ezingenzi nto.
2. I-BlockFi - iMali-mboleko exhaswa yi-Crypto kunye neeAkhawunti zeNzala
I-BlockFi sesinye isisombululo se-DeFi esikuvumela ukuba ukhule utyalo-mali lwakho lwe-cryptocurrency. Yasekwa ngasekupheleni kuka-2017, le nkampani yase-US ibonelela ngeenkonzo zezemali kubo bobabini nakumashishini kwihlabathi liphela.
Owona mnikelo uphambili ubandakanya ukonga imali ezuza umvuzo, imali mboleko enexabiso eliphantsi, kunye Ukurhweba nge-cryptocurrency iinkonzo ngaphandle kwendleko. Inkampani ixhaswa ngamagama amaninzi awaziwayo kwisithuba se-crypto-kubandakanya iCoinbase, iSoFi, kunye nokunye.
Nazi ezinye zeemveliso eziphambili zeBlockFi:
I-Akhawunti yeBhlokoFi yeNzala
Ifana neNexo, iBlockFi ikwavumela ukuba ufumane inzala kubanjiso lwakho lwe-cryptocurrency. Elona zinga liphezulu lenzala onokulufumana yi-8.6% APY- ethe yaqokelelwa yonke imihla kodwa yafakwa kuwe rhoqo ngenyanga.
Kwi-backend, iBlockFi iboleka imali yakho ye-crypto kubabolekisi beenkampani kunye nabantu ngabanye. Iqonga emva koko liqokelela umdla-lona elihlawula abasebenzisi. Akukho dipozithi encinci okanye ibhalansi efunekayo ukuze ufumane inzala.
Imali mboleko yeBlockFi
I-BlockFi ikwavumela abasebenzisi bayo ukuba bafake i-cryptocurrencies njengesibambiso. Oku kwenza ukuba uboleke ubuninzi bexabiso le-50% yesibambiso kwiidola zase-US. Ungafikelela kwimali ngaphandle kwesidingo sokuthengisa iiasethi zakho zedijithali okanye uzithengise.
Nangona kunjalo, le nkqubo ayisebenzi ngokuzenzekelayo. Ukuze ufumane ukufikelela kwimali mboleko, kuya kufuneka kuqala ugcwalise inkqubo ye-KYC / AML ngeenjongo zokuqinisekisa isazisi. Nje ukuba ufake isicelo semali mboleko, Iqela leBlockFi liza kuphonononga isicelo sakho kwaye likunike impendulo ngaphakathi kosuku olunye lweshishini.
Imali mboleko, ukuba yamkelwe, iya kufika kwiakhawunti yakho yeBlockFi ngaphakathi kweeyure ezimbalwa. Isibonelelo semali-mboleko siya kubandakanya lonke ulwazi olubalulekileyo kubandakanya iinkcukacha zendlela ebalwe ngayo imali.
Iirhafu zenzala kwimali mboleko yakho ziya kubalwa ngokusekwe kumanqaku akho etyala, imali mboleko kunye nendawo- enokuthi ibe sezantsi njenge-4.5%.
Akukho zinkonzo zeNtengiso ye-Crypto
Okokugqibela, iBlockFi ibonelela ngeenkonzo zorhwebo ngaphandle kokukuhlawulisa nayiphi na imali eyongezelelweyo. Utshintshiselwano olunikezelweyo lweBlockFi likuvumela ukuba uthenge, uthengise kwaye utshintshe ii-cryptocurrensets kwangoko. Ukurhweba kwenziwa kwangoko, kwaye iiasethi zedijithali ziya kubonakala kwiakhawunti yakho yenzalo yeBlockFi-ilungele inzala eyongezelelekileyo.
Ukongeza kwinqanaba lenzala, iBlockFi ikwakuhlawulisa umrhumo wokuqala we-2% kwimali mboleko yakho exhaswa ngumva nge-crypto. Kukho nemali yokurhoxa eyahluka ngokuxhomekeka kwingqekembe yemali oyirholayo.
Iiasethi zeBlockFi zigcinwe yiGemini Trust Inkampani, ekwaqhuba nolunye lotshintshiselwano olukhulu lwe-cryptocurrency kwaye ilawulwa liSebe leeNkonzo zezeMali laseNew York. Igcina iipesenti ezingama-95 zeeasethi kwindawo yokugcina ebandayo kunye nezinye kwiivenkile ezishushu eziqinisekiswe yiAeon.
Nangona kunjalo, ngoMeyi 2020, iBlockFi ifumene ukophula umthetho. Nangona kungekho mali okanye asethi ibiweyo, ulwazi lomntu lwabanye abasebenzisi lwenzekile. Iqonga likwanazo neempawu ezimbalwa ezitsha ezidwelisiweyo, ezinje ngeBitcoin enomvuzo weKhadi letyala.
Ukuqukumbela, iBlockFi iziveza njengenye indlela efanelekileyo yeenkonzo zemali zemveli. Iqonga licace gca malunga nendlela ezisebenzisa ngayo iidiphozithi zakho - ngokuzibolekisa kuphela kubabolekisi abazinzileyo. Nangona kunjalo, uya kuqaphela ukuba iqonga lixhasa kuphela ii-cryptocurrensets ezilishumi ngoku-ezinokukubeka engxakini.
3.I-Crypto.com -Iplatifomu enye ye-Cryptocurrency ye-One-Stop
I-Crypto.com liqonga elomeleleyo lokugcina imali elasekwa ngo-2016. Ikuvumela ukuba ugcine, udlulise, kwaye utshintshe ngaphezulu kwe-90 + yeedigital kunye nangaphezulu kwe-20 fiat currencies.
Ukongeza, unokufumana inzala kwii-asethi zakho zedijithali kwaye iqonga linikezela ngendlela elula yokuboleka imali usebenzisa i-crypto njengesibambiso sakho.
Ukulandela umendo weqonga lamaqonga amaninzi eDeFi phaya, iCrypto.com ikwazise uphawu lwendalo olunika amandla kwindalo. Yaziwa njenge-CRO Token, ibonelela ngamanqanaba ohlukeneyo eluncedo kwiqonga.
Ifana neNexo, iCrypto.com ikwanayo nenkqubo yeakhawunti esekwe kumsebenzisi- kuxhomekeke kwinani leeCRO Tokens ozibambayo. Okukhona unezixa, kokukhona uya kufumana izibonelelo ezingcono.
Eli qonga leDeFi liphuhlise iCrypto.com Chain, eyi-blockchain kawonke-wonke eyenza intengiselwano ngeefizi ezincinci. Iimveliso zomboneleli we-DeFi zahlulahlulwe zangamacandelo amathathu ahlukeneyo- urhwebo, iintlawulo kunye neenkonzo zezemali.
Nazi ezinye zeemveliso eziphambili zeCrypto.com:
Inqaku le-Crypto Earn likwenza ukwazi ukukhulisa iiasethi zakho zedijithali ngokufumana inzala kuzo. Iqonga ngoku linika inkxaso ngaphezulu kwe-30 yeedijithali kunye neengqekembe ezinzileyo njengendlela yedipozithi.
Okwangoku, zintathu iindlela zokubamba ixesha- inyanga enye, ixesha elimiselweyo leenyanga ezintathu, kunye nexesha lokubamba eliguqukayo.
Inzala oyifumanayo iya kuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo-ukusukela kwinto oyifaka kwi-asethi oyifakileyo, isixa seCRO Tokens osibekileyo, kunye nexesha lokubanjwa. Njengoko unokuthelekelela, ukuba unezinye ii-CRO Tokens - uya kuba nakho ukufumana inzala ephezulu.
Okwangoku, inzala yonyaka iyahluka ukusuka kwi-1% ukuya kuthi ga kwi-8.5%. Inzala iya kubalwa rhoqo kwiiyure ezingama-24 kwaye iya kufakwa kwiakhawunti yakho rhoqo ngeentsuku ezisixhenxe.
ICrypto.com ikuvumela ukuba wenze imali ngeeasethi zakho zedijithali ngaphandle kokuyeka ubunini bazo. Oku kufezekiswa ngemigca yamatyala exhaswa zii-cryptocurrensets.
Unokuboleka ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zexabiso leeasethi zakho zedijithali- ngokudibanisa enye ye-12 yeemali ezixhaswayo eqongeni. Ukwajongene nawe xa ufuna ukuyihlawula imali-mboleko - njengoko kungekho shedyuli imiselweyo yokuhlawula.
Elona xabiso lincinci lihlawulisiweyo yi-8% kwaye linokuya phezulu ngokuxhomekeke kwisibambiso sakho. Unokonwabela namaxabiso wenzala asezantsi ukuba ubamba iithokheni zeCRO.
Ikhadi leVisa leCrypto.com
Eli likhadi elihlawulelwa kwangaphambili elisebenza ngokufana nekhadi lebhanki. Endaweni yokuqhagamshela kwiakhawunti yakho yebhanki, ikhadi leVisa liya kudityaniswa ne-Crypto.com. Unokongeza iakhawunti yakho usebenzisa i-debit / amakhadi etyala, ugqithiselo lwebhanki, okanye ii-cryptocurrensets.
Kukho uluhlu lwamakhadi ahlukeneyo onoku-odola. Oku kukunika ukufikelela kwinkqubo yomvuzo esekwe kwinani leeCRO Tokens ozibambayo.
I- Crypto.com Hlawula
Enye imveliso enomdla ebonelelwa yiCrypto.com sisisombululo sokuhlawula ikhowudi yeQR. Le yinkonzo ikakhulu yabarhwebi- ebavumela ukuba bongeze indlela yokubhatala yedijithali kumaqonga abo.
I- Crystal.com yokuTshintshana
I-Crypto.com ineqonga le-cryptocurrency elenza ukuba kube lula ukutshintshiselana ngeeasethi zedijithali. Iqonga libonelela ngenkxaso kurhwebo lwendawo, urhwebo lomda, kunye nokuthengisa okuphuma.
Iqonga linesakhiwo sentlawulo yokurhweba ngokusekwe kumenzi kunye neerhafu zokuthatha- kuxhomekeke kumthamo weentsuku ezingama-30. Ngaphandle koku, kuya kufuneka uhlawule imali yokurhoxa, esekwe kwi-cryptocurrency efanelekileyo.
Eli qonga le-DeFi lisekwe eHong Kong kwaye libambisene noLedger Vault ukukhusela iiasethi zakho zedijithali. Ukuba ungumhlali wase-US, iimali zakho zikhuselwe yi-FDIC, ukuya kuthi ga kwi-250,000.
Ukushwankathela, iCrypto.com ikunika ukufikelela kwiimveliso ezahlukeneyo kunye neenkonzo ezinokugubungela zonke iimfuno zakho ze-imali yedatha. Nangona kunjalo, akukho nto incinci yokufikelela kwiqonga ledesktop. Phantse yonke imisebenzi yenziwa nge-mobile app yayo. Ngelixa abanye banokuyifumana njengenye indlela elula, abanye banokuyijonga njengokubuyela umva.
4. I-Celsius-Iqonga leNzala ye-Cryptocurrency
I-Celsius Network liqonga le-DeFi elikunika i-17.78% yenzala kwii-asethi zakho ze-crypto ngonyaka. Inkampani yasekwa ngo-2017 kwaye isekwe e-US.
Njengamanye amaqonga kolu luhlu, iCelsius ikakhulu ijolise kwiiakhawunti zenzalo ye-cryptocurrency kunye neenkonzo zokubolekisa ezixhaswa kwangoko ze-crypto.
Ithokheni yemveli yeCelsius-CEL inezinto eziluncedo ezicwangcisiweyo ngaphakathi kwendalo yeqonga. Umzekelo, inokufumana ukubekwa phambili kwimali mboleko, ikunike ukufikelela kumazinga angcono okufumana, amaxabiso emali mboleko ancitshisiweyo, kunye nenkxaso yeprimiyamu.
I-Celsius yahlula abasebenzisi bayo ngokwamanqanaba amane okunyaniseka- ngokusekwe kwii-CEL zokubamba kwakho. Kukho amanqanaba amane ahlukeneyo, nganye ikunika ukunyuka kwamaxabiso omvuzo.
Nazi ezinye zeemveliso eziphambili zeCelsius:
Ukugcina i-crypto kwi-Celcius kunokukunika ukufikelela kwimbuyekezo ephezulu yenzala kwiiasethi zakho. Ungayitshintsha ngokulula imali yakho yedijithali kwisipaji seCelsius ukuqala ukufumana umvuzo phantse kwangoko.
Eyona ntlawulo yenzala ibalwa veki nganye ngolwesiHlanu kwaye ifakwe kwiakhawunti yakho rhoqo ngoMvulo. Akukho xesha libekiweyo kwezi dipozithi, kwaye ukhululekile ukurhoxisa inqununu kunye nomdla nangaliphi na ixesha olithandayo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, unokufumana kangange-17.78% ngonyaka-unikwe ukuba uneeCEL ezaneleyo zokubamba eqongeni.
Ukubolekwa kwe-idijithali yemali yenye into eyenziwe lula yiCelsius. Ukuba ungumnini wazo naziphi na iimali zemali zedijithali, ungazisebenzisa njengesibambiso ukufumana imali-mboleko - ngohlobo lwemali ezinkozo okanye ezinye iimali.
Kuxhomekeka kwinqanaba lokunyaniseka ongowalo, inzala kwimali mboleko yakho inokuhamba iphantsi njenge-1%. Yonke le nkqubo izenzekelayo kwaye inokugqitywa ngaphandle kokutshekishwa kwetyala.
Ubude bexesha lemali mboleko bungaba phakathi kweenyanga ezintandathu ukuya kwiminyaka emi-3. Iqonga ngoku libonelela ngeemali-mboleko ezixhaswe nge-crypto ngokuchasene ne-25 yedijithali.
I-CelPay yinkqubo yokuhlawula ekuvumela ukuba uthumele i-cryptocurrensets kuye nakubani na-nakwabo bangenayo i-crypto wallet. Insiza iya kuvelisa ikhonkco enika umamkeli ukufikelela kwisipaji seCelPay esigcina iingqekembe ozithumeleyo.
Into oyifunayo ziinkcukacha zabo zonxibelelwano, ezinje ngedilesi ye-imeyile okanye inombolo yefowuni, ukubazisa malunga nentengiselwano.
Akukho ntlawulo kwaphela kwiCelsius - hayi ngokwemirhumo yokurhoxa, iifizi zokuvela, okanye iifizi zedipozithi. Inzala iya kufakwa ngqo kwiakhawunti yakho-ivumela ikomkhulu lakho ukuba lihlanganiswe ngokuhamba kwexesha. Kuya kufuneka uzixhalabise ngentlawulo yemali mboleko- xa unokusebenzisa iCelsius ukuboleka imali.
I-Celsius liqonga lokugcina-oko kuthetha ukuba kubamba ii-asethi zakho zedijithali ukuze zigcinwe zikhuselekile. Oko kwathethileyo, ukuba kwenzeka nawuphi na umonakalo, inkampani ibango ukuba iya kusebenzisa iphepha lemali eseleyo ukuhlawula ilahleko. Ukongeza, i-Foreblocks kunye ne-PrimeTrust ikwabonelela nge-inshurensi yeeasethi zedijithali ezigcinwe eqongeni.
Ngokubanzi, iCelsius liqonga elibolekisa kakhulu kwi-cryptocurrency. Nangona isenokungabi nazimpawu ze-savvy njengamanye amaqonga adweliswe apha-into ayibonisayo iyaphawuleka.
5. IGemini-Utshintshiselwano ngeDatha yeDijithali yemali
IGemini lutshintshiselwano nge-imali yedatha eyaziwayo ngokusekwa ngamawele eWinklevoss. Inkampani inegama elihle lokuthobela kunye nokukhuseleka kwimibutho yolawulo yaseMelika.
Eyasungulwa ngo-2015, iGemini inikezela abathengisi be-cryptocurrency kunye nabatyalomali ukufikelela kwii-26 zemali zedijithali kunye neethokheni. Nangona kunjalo, endaweni yokuzama ukuthintela ummiselo, iqonga lagqiba kwelokuba lilamkele-linike umda ngaphezulu kwabo bakhuphisana nabo.
IGemini inemali yayo ezinzileyo- ebizwa ngokuba yiGemini Dollar, okanye iGUSD. Iyaguqulelwa kwi- $ 1 ngokuchanekileyo, oko kukuthi yi-1: 1 yeedola ezixhaswe nge-USD.
Yithokheni ehlelwe ngokupheleleyo, enokuthi yenziwe okanye itshintshwe kwiqonga leGemini.
Nazi ezinye zeemveliso eziphambili zeGemini:
IGemini ikakhulu lutshintshiselwano nge-imali yedatha. Inobuhlobo obunomdla kwaye iyakuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise i-crypto kwangoko kwinqanaba lentengiso. Kukho into 'yokuThenga ngokuzenzekelayo' ekuvumela ukuba ucwangcise ukuthengwa kwe-crypto.
Kubatyali mali abanamava, iGemini ikwanayo nengcali iqonga lokurhweba ibizwa ngokuba yi-ActiveTrader. Iza kulayishwa izinto ezinje ngeetshathi zezibane kunye neendidi ezahlukeneyo zeodolo.
IGemini Earn ikuvumela ukuba unyuke ufike kwi-7.4% yokubuyisa kwiidiphozithi zakho ze-cryptocurrency. Inzala ihlawulwa yonke imihla kwaye yongezwa ngokuthe ngqo kwiakhawunti yakho yeGemini Earn - oko kuthetha ukuba unakho ukuxhamla ekukhuleni okudibanisa.
Ukuhlawulwa kweGemini sisoftware ekuvumela ukuba uthenge izinto kwi-Intanethi usebenzisa ii-cryptocurrensets. Iqonga likwinkqubo yokongeza abathengisi abaninzi ukuze bandise usetyenziso lweapp. Unokusebenzisa usetyenziso ukwenza intlawulo nge-GUSD. IGemini Pay ayikuhlawulisi nayiphi na imali eyongezelelweyo yokwenza iinkqubo zentengiselwano.
Abarhwebi kutshintshiselwano kuya kufuneka bahlawule i-0.50% yemali yokuhlawulela kuyo yonke intengiselwano. Oku kuphezulu kwekhomishini yorhwebo, emiselwe ubuncinci be-1.49%. Abathengisi abaphambili bafumana isivumelwano esingcono kwi-0.35% kurhwebo ngalunye.
Njengenkampani ebhalisiweyo yeNew York Trust Inkampani, iGemini ibonisa iziqinisekiso ezininzi zokhuseleko. Ifemi ixhomekeke kwimigaqo yokhuselo lwe-cyber-ebekwe yi-DFS. Ikwangumgcini wokuqala wehlabathi ukugqibezela zombini iimviwo ze-SOC 1 kunye ne-SOC 2 yohlobo lwe-2, kunye nesiqinisekiso se-ISO 27001.
Ngokuqinisekileyo iGemini ibonelela ngokhuseleko olubalaseleyo kunye nokuthotyelwa, ngakumbi abathengi baseMelika. Nangona iifizi zisenokuba kwisiphelo esiphakamileyo-kunokuba kufanelekile ukuba uqwalasele ukuba iqonga liza ligcwele ziimpawu kwaye linikezela ngokhuseleko olungcono kwimali yakho.
Umngcipheko weeNkqubo eziSasazwayo
Njengaso nasiphi na isixhobo sezezimali, kukho umngcipheko obandakanyekayo kumzi mveliso we-crypto nakwimanyano- kunye neDeFi ngokunjalo. Ukufikelela ngqo kwikapitali kuyenza ithagethi yosongelo lokhuseleko.
Oko kwathethi, imboni yeDeFi iyabazi ubungozi kwaye isebenza ekuphuhliseni ii -apps ezinokoyisa le mingeni. Umzekelo, usetyenziso lweDeFi lunokuxhamla kuvavanyo oluthe kratya ukuqinisekisa ukuba intengiselwano yenziwe kwiidilesi ezichanekileyo. Oku kuya kubonelela ngolongezelelo lwentembeko phakathi kwabathengi.
Kwixesha elidlulileyo, iiprojekthi zeDeFi bezikade zijolise kukophula ukhuseleko- egxininisa isidingo esikhulayo sokhuseleko kushishino. Emva kwayo yonke loo nto, liqhekeza lamaqonga akhoyo alawulwayo. Kuya kubakho isidingo esandayo sokuthobela njengoko icandelo likhula.
Okona kubaluleke kakhulu, njengoko iinkqubo zeDeFi zisephantsi kophuhliso, kusoloko kukho umngcipheko wokungaphumeleli. Nangona kunjalo, amaqonga kunye neenkampani zisebenza nzima ukufezekisa la manyathelo okugqibela ekufezekiseni injongo yokwamkelwa okukhulu kwezezimali ezisemthethweni - kusetyenziswa imali yeinshurensi, kunye nezivumelwano ezifanelekileyo.
Ulawulo lweZimali luvula iingcango zamathuba abangela umdla kubatyali mali. Ukusuka kutshintshiselwano nge-inshurensi ukuya kwizisombululo ze-staking-kukho iqonga le-DeFi elinokujongana neemfuno zakho.
Nangona kunjalo, khumbula ukuba ayizizo zonke iiplatifomu ze-DeFi ezikhuselekileyo okanye ezivavanyiweyo ngokufanelekileyo. Ukuba ufuna ukufumana incasa yesenzo, kuya kuba ngcono ukunamathela kumaqonga alawulwayo anjengeNexo enegama elide kwishishini.
Nangona kunjalo, qiniseka ukuba uyayenza inkuthalo yakho phambi kokuba utyale iiasethi zakho nasiphi na isisombululo seDeFi.
Ezezimali ezabelwe amaziko, kungenjalo eyaziwa njengeDeFi, ijolise ekunikezeleni iinkonzo ezifanayo zezemali njengeenkqubo eziqhelekileyo zebhanki- ngaphandle kwesidingo sabalamli. Ezi zakhiwe kusetyenziswa iikhontrakthi ezikrelekrele kwii-blockchains, ezenza ukuba zitshiphu kwaye zibonakalise ngakumbi.
Zithini izicelo zeMali eziMiselweyo?
Amatyala okusetyenziswa kweDeFi andisela phantse kuwo onke amanqanaba enkqubo yezemali. Nokuba kukuboleka, ukuboleka, ukubamba, okanye i-inshurensi, unokufumana izisombululo zeDeFi ezilungiselela uluhlu lweemveliso kunye neenkonzo.
Ngaba iDeFi inobungozi?
Njengalo naliphi na iqonga lezemali, kukho umngcipheko othile ochaphazelekayo kwiDeFi. Ezi zisombululo azifane zilawulwe kwaye zinokuthambeka kwizisongelo zokhuseleko. Qiniseka ukuba uyaphanda ngaphambi kokubeka iiasethi zakho kulo naliphi na iqonga leDeFi.
Leliphi elona qonga libalaseleyo leDeFi?
Kunzima ukunciphisa iqonga elinye leDeFi. Sicebisa ukuba ujonge kwiNexo okanye iGemini- kuba ezi nkonzo zigutyungelwe yi-inshurensi kwaye zinikezela ngeempawu ezintle.